Huawei Hubble သည် Glinsun.ai တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သည် - Pandaily
Huawei Hubble သည် Glinsun.ai တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သည်
Feb 21, 2022, 16:40ညနေ 2022/02/21 23:39:37 Pandaily
Wuhan Glinsun.ai Artificial Intelligence Technology Co., Ltd. (Glinsun.ai) သည် မကြာသေးမီက ပြောင်းလဲ သွားကြောင်း China Business Inquiry Platform Tianyan Check မှ ပြသ ခဲ့သည်၎င်း ၏တရားဝင် စီးပွားရေး သတင်းအချက်အလက်မှတ်ပုံတင်ထားသော အရင်းအနှီး သည်ယွမ် ၃၆. ၁၆၉ သန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅. ၇၁ သန်း) သို့ တိုးတက်ခဲ့ပြီး ၁၃. ၇၄% တိုးတက်ခဲ့သည်။ ထို႔အျပင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္း ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ အီလက္ထ ရြန္ နစ္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ ေနသည့္ Huawei ကုမၸဏီက တည္ေထာင္ ခဲ့သည့္ Shenzhen Hubble Technology Investment Company သည္ ကုမၸဏီ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အသစ္ တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။
တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆိုက် အရ Glinsun.ai သည် စက်မှု လုပ်ငန်းနှင့် ဖက်ရှင် နယ်ပယ်များတွင် အမြင်အာရုံ အသိအမှတ်ပြု ခြင်း၊ ဂရပ်ဖစ် နှင့် ရုပ်ပုံ များကဲ့သို့သော ခေတ်မီ နည်းပညာ များ၏ ဆန်းသစ် သော အသုံးချ မှုများကို အာရုံစိုက်သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး တရားဝင် ကိုယ်စားလှယ် Zhong Shoucheng ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ ၏လုပ်ငန်း နယ်ပယ်တွင် အသိဉာဏ်ရှိသော နည်းပညာ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ virtual reality software နှင့် hardware ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ လက်ကား ရောင်းဝယ် မှု၊ လက်လီ ရောင်းဝယ် မှု၊ အ ၀ တ်အထည် အသိဉာဏ်ရှိသော ဒီဇိုင်း ၊။
လောလောဆယ်, Glinsun.ai ရဲ့ ထုတ်ကုန် အဝတ်အစား ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှု နှင့် ရောင်းချ မှု ဖုံးလွှမ်း နှင့် လွတ်လပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့် 3D (3D) လူ့ခန္ဓာကိုယ် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး နှင့် မြင့်မား-တိကျ ထည် ခြင်း simulation နည်းပညာ မှတဆင့်, ဝေးလံသော အသိဉာဏ် တိုင်းတာခြင်း အပါအဝင် အထည်ချုပ် စက်မှုလုပ်ငန်း အတွက် terminal ကို applications များမှ တိုးချဲ့, ကို virtual လျောက်ပတ်, etc
2019 ခုနှစ်မှစ၍ ကုမ္ပဏီ သည်လက်ရှိ နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ မော်တော်ကား များ၊ စက်ရုပ် များနှင့် စမတ် မြို့ ကြီးများ စသည့် အခြား စျေးကွက် များသို့ တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ မော်တော်ကား စမတ် လေယာဉ်မှူး များ တွင်အဓိက ထုတ်ကုန် များစွာသည် Huawei နှင့် Daimler-Benz အပါအ ၀ င် တရုတ်နှင့် ကမ္ဘာ့ ထိပ်တန်း ထုတ်လုပ် သူများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Huawei Hubble Investment သည် ပုဂ္ဂလိက ရှယ်ယာ မန်နေဂျာ အဖြစ် မှတ်ပုံတင် သည်
မော်တော်ကား ကဏ္ sector တွင် ကုမ္ပဏီ အား Autobahn နှင့် PNP China Incubator အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ Daimler-Benz နှင့် ပူးပေါင်း၍ ယူဆောင် လာသည့် 3D လူ့ခန္ဓာကိုယ် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး ထုတ်ကုန်များကို စမတ် လေယာဉ်မှူး များတွင် အသုံးပြုခဲ့သည်။ Algorithm သည် လူ့ခန္ဓာကိုယ် အချက်အလက်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ရရှိပြီး ယာဉ် မော င်းသည် ထိုင်ခုံ စောင်း ထောင့် နှင့် အကွာအဝေး ကိုချိန်ညှိ ရန်နှင့် ခရီးသွား လုံခြုံ မှုနှင့် သက်တောင့် သက် သာရှိ စေရန် ယာဉ် ပေါ်ရှိ ကွန်ပျူတာ သို့ အလိုအလျောက် upload လုပ်သည်။